Human Rights Watch oo sheegtay inay ciidamada Eritea ay dembiyo dagaal ka gesteen gobolka Tigray ee Itoobiya. | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Human Rights Watch oo sheegtay inay ciidamada Eritea ay dembiyo dagaal ka...
Hay’adda xuquuqda aadanaha u doodda ee Human Rights Watch ayaa sheegtay inay heshay caddeymo muujinaya in ciidamada Eritea ay “dembiyo dagaal” ka gesteen gobolka Tigray ee Itoobiya.
Waa hay’addii labaad ee caalami ah ee todobaad gudihii ku eedeysa ciidamada Eritea inay beegsadeen dad rayid ah mudada uu socday dagaalka Tigray, inkastoo ay eedeyntaas beenisay xukuumadda Asmara.
Hay’adda kale ee Amnesty International ayaa horraantii todobaadkan shaacisay in ciidamada Eritrea ay dhac iyo dilal sharciga ka baxsan ka fuliyeen gobolka Tigray.
Human Rights Watch ayaa sheegtay in askarta Eritrea ay xasuuq ka geysteen magaalada qadiimiga ah ee Axum, halkaas ay ku laayeen shacab ay kamid yihiin carruur da’doodu ka yartahay 13 jir.
“19-kii November, ciidamada Itoobiya iyo Eritrea ayaa si aan kala sooc lahayn u duqeeyay magaalada Axum, waxaana halkaa ku dhintay kuna dhaawacmay dad rayid ah,” ayaa lagu sheegay warbixinta Human Rights Watch.
Hay’adda ayaa intaa ku dartay in ciidamada Eritrea oo ka falcelinaya weerar 28-kii November uga yimid jabhad Tigray ah iyo dadka deegaanka Axum, ay xasuuqa ka geysteen magaalada iyagoo dadka laynayay muddo 24 saac ah.
“Ciidamada Eritrea waxa ay dilal fool-xun ka geysteen Axum, iyagoo aan u aaba-yeelin dadka rayidka ah. Waxaa la joogaa xilligii ay mas’uuliyiinta Itoobiya iyo Eritrea ka gudbi lahaayeen beeninta oo ay cadaallad u heli lahaayeen dadka dhibaatada loo geystay,” ayay sheegtay Laetitia Bader oo ah agaasimaha Human Rights Watch ee Geeska Afrika.
Eritrea ayaa marar badan beenisay in ciidamadeeda ay qeyb ka yihiin colaadda Tigray, taasoo horraantii bishii November billaabatay kadib markii uu ra’iisal wasaare Abiy Axmed duulaan cir iyo dhul ah ku qaaday gobolkaas.
Xukuumadda Ethiopia ayaa garawsatay rabshadaha ka dhacay Axum, waxaana ay ballanqaaday inay u oggolaaneyso baarayaal caalami ah inay gaaraan gobolka.
Maraykanka ayaa dhawaan sheegay inuu aad uga walaacsan yahay tacaddiyada laga soo sheegayo gobolka Tigray.
Xoghayaha arimaha dibedda ee Maraykanka, Antony Blinken ayaa war saxaafadeed uu soo saaray ku sheegay in dalkiisa uu xukuumadda Itoobiya ugu baaqay inay soo afjarto colaadda ka taagan gobolkaas.
“Waxaan si weyn u cambaareyneynaa dilalka, barakacinta, xadgudubyada galmada iyo tacaddiya kale ee ay dhinacyada geysanayaan isla markaana ay ka warrameen dhowr hay’adood,” ayaa lagu sheegay war saxaafadeedka.
Wasaaradda arimaha dibedda ee Maraykanka ayaa ku talisay in si degdeg ah gobolkaas looga saaro ciidamo ay sheegtay inay ka yimaadeen Eritrea iyo deegaanka Amxaarada ee deriska la ah Tigray.
“In si degdeg ah ciidamada Eritrea iyo kuwa gobolka Amxaarada looga saaro Tigray ayaa ah tallaabada koobaad ee muhiimka ah. Waa inay xigto xabbad-joojin ay dhaqangelinayaan dhammaan dhinacyada iyo in gargaarka si shuruud la’aan ah loo gaarsiiyo shacabka Tigray,” ayuu sheegay Maraykanka.
Xukuumadda Addis Ababa oo ka jawaabeysa hadalka xoghayaha arimaha dibedda ee Maraykanka ayaa sheegtay inay ka go’an tahay ka gungaaridda tacaddiyada laga soo sheegay gobolka Tigray.
Waxaa se ay sheegtay in Maraykanka uu u muuqdo mid faragelinaya arimaha gudaha ee Itoobiya, taasina ay tahay wax laga xumaado.
“Isku-dayga uu Maraykanka uga hadlayo arimaha gudaha ee Itoobiya, gaar ahaan xooggaga gobolka Amxaarada ee lagu sheegay war saxaafadeedka ayaa ah wax laga xumaado,” ayay sheegtay xukuumadda Addis Ababa.
Previous articleHalkaan ka Daawo hadalada kul kulul ay is dhaafsadeen Cabdiramaan Cabdishakuur iyo Xundubay
Next articleDiyaarad Helikopter oo ay Milliteriga Turky leeyihiin oo ku burburtay meel ku dhow Tuulladda Cekmece
Soomaalida iyo waddaniyada
Maxkamadda ICJ oo shaacisay sida loo dhagaysanayo dacwadda badda Soomaaliya iyo...
Ciidamadii ugu Badnaa ebid oo Madaxweyne Dani Kala soo dagay magaalada...